Badges Badwood, Akpụkpọ anụ
Profaili profaịlụ na caba
Exruded Rubber Sealing Drip
Igwe Igwe Njikere Rubber
Ndị na-echebe caba
Ndị nchebe maka ebubo nke ibu
Nchebe Ndị Pụrụ Iche Maka Ụdọ Gburugburu
Ndị na-echebe caba maka ụgbọ mmiri
Onye na-echebe Proteber maka Andenes
Ụgbọ njem maka ebe ndị na-adọba ụgbọala
Baden nke Rubber
Ezigbo ụlọ ọrụ
Ngosipụta Ngosipụta Ngosipụ aka
Mpempe akwụkwọ alumini na ahịhịa
Faịlụ profaịlụ Aluminom
N'ịbụ onye e guzobere na 1989, Foshan Shunde Leliu Hingsking Plastic & Metal Products Co., Ltd. bụ onye na-emepụta akwa ngwaahịa rubber na ngwaahịa ngwaahịa maka ụlọ ahịa. Ngwaahịa anyị dị ukwuu gụnyere profaịlụ na rọba
Ezigbo ụlọ ọrụ Ndị na-echebe caba Exruded Rubber Sealing Drip Extruded Plastic Profile Ngwá akpụ plastic Moldings Rubber flooring Ngwaahịa Profaili profaịlụ na caba
Solid EPDM Rubber Tape
Anyị na-arụpụta ma na-ere ngwunye EPDM rubber nke ọ bụla ọ bụla na ọkpụrụkpụ. Ihe ngwugwu EPDM siri ike na-abịa n'ọtụtụ dịgasị iche iche na ike....
Anyị moldings nwere ezi chemical na n'ụzọ anụ ahụ Njirimara. Ha na-eguzogide ọgwụ corrosion, mmanụ, elu-ala okpomọkụ, eyi na merela agadi, na-enwe akwa siri. The plastic injection ngwaahịa arụ ihe...
NBR (nitrile butadiene roba) bụ ụdị roba nke nwere ezigbo mmanụ na-eguzogide, na-eyi ndị na-eguzogide na dọkatụrụ adọka eguzogide. E wezụga, Nitrile kpụrụ ngwaahịa nwere pụtara ìhè airtightness. Anyị ...
Anyị na-enye a dịgasị iche iche nke extruded plastic profaịlụ n'ihi na ị na ịhọrọ site na, gụnyere Pee ụfụfụ mkpara, ịkwanyere extrusion plastic profaịlụ, extruded TPE profaịlụ, TPU extrusion plas...
Site na oke nhọrọ nke ndi na-echebe anyi, anyi nwere ike ikpuchi uzo maka ugbo o bula. Ndị a na-echebe ndị na-echebe mkpuchi ụgbọ mmiri iji chebe ihe ọ bụla dị n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ....
A na-eji ndị na-ekpuchi oghere na-edozi ahụ maka ụdị dịgasị iche iche nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke azụmahịa iji gbochie njigide na abrasion. Ndị nchebe a na-ekpuchi roba na-enye nchebe kachasị na-ad...
Ndị nchebe pụrụ iche dị maka ibudata isi iyi dị iche iche: akụkụ anọ, cylindrical, D ekara, wdg. Ha na-adabara ma mpụga na nchedo ime ụlọ, ha dịkwa ike iji nweta nrụgide na mmetụta. Ndị nchebe a na-em...
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa mkpuchi mkpuchi gị, ndị nchebe a bụ ngwọta ziri ezi. Anyị na-enye ndị nchebe mmiri na-arụ ọrụ maka mmiri na-ebugharị ụgbọ okporo ígwè dị elu, na-eme ka nchebe ọzọ pụọ n'ih...
Ngwurugwu roba na-enyere aka na-agafeghị oke n'enyeghị ụda ma na-enweghị nchekasị maka ndị ọkwọ ụgbọala. Oké roba siri ike bụ ihe nchebe nke na-egbochi ndị mmadụ na-egbochi ya. Ihe nkedo nke roba ...
A na-eme nkuku ala ala iji jiri ya mee ihe n'elu isi nke usoro. Nkọwapụta staircase anyị na-arụpụta ihe mara mma ma chebe ọnụ ọnụ ụzọ, ma ọ bụ ma ọ bụ nke ochie, nke ejiji, na mgbakwunye na ikpuch...
Ahịhịa anyị na-emepụta ihu igwe na-eme ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ndị ahịa anyị chọrọ. Site n'iji ha mee ihe dị ka ikpo ọkụ ihu igwe na nhicha, nsị ndị a dị mfe ma dị mfe ịgbakọta. Anyị nwere ike ịmepụt...
Igwe mmerụ igwe anaghị agba mbọ hụ ebe nchekwa maka ndị ìsì ma ọ bụ ndị na-ahụ anya, na-ekwe ka ha ruo ebe ha na-aga n'enweghị nsogbu. Ebe ndị a na-eme ihe na-abụghị ihe efu, si otú ahụ na-eme ka ...
Anyị na-enye ngwaahịa dị iche iche nke ngwaahịa iji gboo mkpa gị niile. Ndị a na-agụnye nchara njirimara, ọnụọgụ ọkụ aluminom, profaịlụ aluminom maka ọkwa, wdg....
Anyị na-enye ngwọta dị iche iche ntanetị, dị ka polypropylene weatherstrip, ma ọ bụ ajị anụ polypropylene kpara na ma ọ bụ na-enweghị silicone. Achịkpọ igwe na-adị mfe igbokọta, ma na-enye akara akara...
365 Days Ngwa ngwa Tụkwasịnụ
dị: 0086-757-25339480 (Sivvy Leung - sales supervisor) 0086-757-25339482 (Iris Guo - sales representative)
Adreesị: 5 Longchong Road, Fuyu Industrial Zone, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong 528324, China